merolagani - जीवन बिमा क्षेत्रको सर्वाधिक ठूलो कम्पनी नेपाल लाईफको प्रगतिलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
जीवन बिमा क्षेत्रको सर्वाधिक ठूलो कम्पनी नेपाल लाईफको प्रगतिलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
Nov 13, 2016 Merolagani
नेपालको जीवन बिमा क्षेत्रको सर्वाधिक ठूलो कम्पनी नेपाल लाईफ(NLIC)को प्रथम त्रैमासिक प्रगति बिबरण अनुसार उसले यस अवधिमा पाँच करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ जब कि उसले गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा जम्मा एक करोड ६४ लाख कमाएको थियो । नेपाल लाईफको खुद नाफा २५९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, यद्यपी यो बिमांकीय मूल्यांकन अघिको हिसाब हो ।
दुई अर्ब १६ करोड चुक्ता पूँजी रहेको नेपाल लाईफको जगेडा कोषमा ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । उसको जीवन बिमा कोषमा ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा झण्डै १० अर्बले बढी हो । बिमा शुल्क आर्जनको हिसाबले हालसम्म उसले ४२ अर्ब पुर्याएको छ, अघिल्लो आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म यो २५ अर्ब मात्र थियो । नेपाल लाईफले गत बर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नौ लाख ८५ हजार पाँच सय ९६ बिमा लेख जारी गरेकोमा यस बर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा त्यो बढेर १० लाख २० हजार नाघेको छ । दावी भुक्तानी तर्फ गत बर्षको यसै त्रैमाससम्म ४३ करोड रहेकोमा यस बर्ष ६० करोड नाघेको छ । दावी भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि यस बर्ष झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।
नेपाल लाईफको बित्तीय बिबरण हेर्न यहाँ जानुहोस् ।
नेपाल लाईफको यो प्रगति बिबरण हेर्दा गत बर्षको भुकम्पपछि नेपालको बिमा बजार बढेको देखिन्छ । \_
नेपाल लाईफले झण्डै ३१ लाख कित्ता थप नयाँ साधारण सेयर अर्थात एफपीओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निबेदन दिएकाले त्यो जारी भएमा उसको चुक्ता पूँजी झण्डै दुई अर्ब ५० करोड पुग्ने छ । एफपीओको प्रिमियम कति कायम हुने भन्ने कुराले जगेडा कोषमा जम्मा हुने रकमलाई निर्धारण गर्ने छ ।
नेपाल लाईफ लाईफको प्रति सेयर आम्दानी १०.८८ रुपैयाँ, प्रति सेयर नेटवर्थ १२१.९१ , मूल्य आम्दानी अनुपात ३७२ रहेको छ । महंगो सेयर मूल्य भएको नेपाल लाईफले उसका बिमितहरुलाई बाड्ने बोनस दर पनि आकर्षक नै छ ।